Ny tenako sy ny fiainako hoy ny Papa François no anisan’ny ifampizarako satria izaho dia ao anatin’ny salan-taonan’ireo zokiolona ireo. Mialohan’ny handalinantsika ny katesizy nomen’ny Papa François momba ny antso manokana ho an’ireo zokiolona toa azy dia tsara ihany angamba ny mamerina kely izay efa hita tany amin’ny katesizy fiomanana mahakasika ny antson’Andriamanitra nataontsika talohan’iny fandalovany teto.
Inona moa ny antso na hoe ny antson’Andriamanitra?
Avy amin’ny teny latinina hoe “vocare” midika hoe “appeler” io antso io. Antso na antson’Andriamanitra no mahalaza azy ho antsika Malagasy. Ny olona rehetra dia voaantso avokoa (jereo Rom 8, 30). Ary ny konsily Vatikana II dia mamaritra mazava tsara fa ny tanjon’ny antso dia ny fahamasinana. Voaantso ho masina isika.
Tian’Andriamanitra ny olona rehetra ka izany no ilazana fa manana antso izy na ny marimarina kokoa ho manana antson’Andriamanitra izy ary ny olona kosa dia manana ny hetaheta sy ny faniriana mazana ny ho tianAndriamanitra. Nanomboka tany amin’i Abrahama dia noheverina fa ireo izay mahatsapa fa antsoin’Andriamanitra ihany no manana antso. Anisan’ny nantsoin’Andriamanitra matetika moa i Abrahama.
Ao amin’ny Eglizy dia voaantso ny tsirairay hanamasin-tena amin’ny alalan’ireo lalana voatokana ho amin’izany toy ny mariazy, ny iraka isan-karazany ao amin’ny Eglizy, ny fiainan-drelijiozy, ny raharaha maha diakra, pretra, eveka.